स्पाम कल आउँदा होसियार – Nepal Parikrama
काठमाडौं– तपाईंको मोबाइलमा नचिनेको नम्बरबाट ‘मिस्ड कल’ आइरहेको छ ? यसो हो भने होसियार हुनुहोस् । नचिनेको नम्बरबाट आएको ‘मिस्ड कल’मा ‘कल ब्याक’ गर्दा तपाईंको मोबाइलको गोप्य सूचना चोरिनुका साथै ब्यालेन्स पनि रित्तिन सक्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलका मोबाइल बोक्ने कतिपय ग्राहकको मोबाइलमा विदेशको नम्बरबाट मिस्ड कल आएर हैरान हुने गरेको छ । पटक–पटक आउने मिस्ड कलमा कल व्याक गर्दा मोबाइलमा रहेको व्यालेन्स नै सकिने समस्याले मोबाइल प्रयोगकर्ता हैरान बनेका छन् ।
नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइल नम्बरमा प्लस २१६९८..प्लस ६७४५.., प्लस २१२… लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोन नम्बरबाट पटक पटक मिस्ड कल आउने गरेको छ । यस्तो कललाई स्पाम कल अर्थात अनावश्यक कल भनिन्छ । धेरैजसो मोबाइल प्रयोगकर्तालाई प्लस २१६… नम्बरको मोबाइलबाट कल र मिस्ड कल आउने गरेको पाइएको छ । साथै उक्त नम्बर ट्युनिसियामा रजिस्टर भएको देखाउने गरेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ट्युनिसियाबाहेक महंगो शुल्क लाग्ने देशका नम्बरहरुबाट पनि मिस कल आइरहने गर्छ । र उत्त नम्बरमा कल व्याक गर्दा व्यालेन्स सकिने गरेको छ । यस्ता कलबाट बच्न अनावश्यक ठाउंमा मोबाइल नम्बर रजिस्टर नगर्ने, नचिनेको नम्बरबाट कल आएमा कलब्याक नगर्ने लगायतका उपाय अबलम्बन गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । स्पाम कल आउन थालेपछि टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले सावधानी अपनाउन ग्राहकलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । केही समयअघिमात्र ‘आफ्नो प्रेमलाई भेट्न चाहनुहुन्छ ? अहिले फोन गर्नुहोस’ ‘साँचो मित्रताले तपाईंलाई पर्खिरहेको छ । प्लस २४३१३३०९८९ मायालु युवतीहरूसंग गफ गर्न चाहनुहुन्छ ?’ जस्ता स्पाम म्यासेजले मोबाइल प्रयोगकर्तामा आतङ्क मच्चाएको थियो ।
Published On: २४ बैशाख २०७४, आईतवार २०:१०